चिसो मौसम मुटु रोगीका लागि किन जोखिमपूर्ण? कसरी बच्ने? (भिडियो) :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
चिसो मौसम मुटु रोगीका लागि किन जोखिमपूर्ण? कसरी बच्ने? (भिडियो)
कमला गुरुङ शनिबार, पुस १०, २०७८, ०८:५३:००
काठमाडौं– चिसाले मुटुलाई शिथिल बनाउँछ। चिसो मौसममा शरीरलाई तातो बनाउन तथा रक्तसञ्चार गर्न मुटुले बढी काम गर्नुपर्छ। मुटुलाई भार पर्ने भएकाले चिसो मौसम मुटु रोगीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
अत्यधिक चिसोले स्वस्थ मानिसलाई पनि हृदयघात तथा मस्तिष्कघात हुने खतरा रहन्छ। स्टार अस्पतालका मुटु रोग विशेषज्ञ एवं हेड अफ डिपार्टमेन्ट डा आनन्द जिसी चिसो मौसममा निको भइसकेका मुटु रोग बल्झिने खतरा हुने बताउँछन्। चिसोबाट बच्ने उपायसँगै रोगका बारेमा पनि उत्तिकै सचेत रहन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
चिसो मौसम मुटु रोगीका लागि किन जोखिमपूर्ण मानिन्छ? कसरी बच्ने लगायत विषयमा हामीले डा जिसीसँग थप कुराकानी गरका छौं। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
चिसो मौसम र मुटु रोगको सम्बन्ध के छ ?
– चिसो मौसम मुटु रोगीका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
– गर्मीमा भन्दा चिसो मौसममा मुटुसम्बन्धी रोग बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
– औषधि खाएर निको भइसकेका मुटु रोगीहरुको समस्या बल्झने जोखिम हुन्छ।
चिसोमा के कारणले मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने र समस्या बढ्ने सम्भावना हुन्छ?
– चिसो मौसममा रक्तसञ्चार नलीहरु कहिलेकाहीँ खुम्चिन्छ।
– ती नलीहरु खुम्चिएपछि रक्तसञ्चार हुँदैन र ब्लक हुन्छ। जसले गर्दा हृदयघात भइ बिरामीको अचानक मृत्यु हुन सक्छ।
– रक्तसञ्चार नली खुम्चिँदा रक्तचाप पनि बढ्छ। यसले मुटु र मस्तिष्क दुवैमा असर गर्न सक्छ।
– चिसोमा धेरै चिल्लो खाना खाने र निस्क्रिय दैनिकीका कारण पनि मुटु रोगको जोखिम बढ्छ।
– चिसोमा धेरैले धुम्रपान र मादक पदार्थको प्रयोग बढी गर्ने भएकाले पनि मुटुमा असर गर्छ।
उच्च रक्तचाप मुटुको लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम मानिन्छ। यो चिसो मौसममा रक्तचाप किन बढ्छ?
– जाडोमा मुटुले बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले रक्तचाप पनि बढ्छ।
– जाडोमा क्यालोरी भएका खाना बढी खाने र व्यायाम नगर्ने भएकाले पनि जोखिम बढाउँछ।
चिसो मौसममा मुटु रोगीहरुले के कुरामा ध्यान दिने? कस्तो खापान हुन आवश्यक छ?
– चिसो मौसममा न्यानो कपडा लगाउने, प्रशस्त मात्रामा मनतातो पानी पिउनुपर्छ।
– बिहानै मर्निङ वाक जानु हुँदैन। घाम लागिसकेपछि वा साँझ हिँड्न सकिन्छ।
– जाडोमा १० देखि २० प्रतिशत रक्तचाप बढ्न भनेर भनिन्छ।
– गर्मीमा नियन्त्रणमा रहेको रक्तचाप जाडोमा नहुन सक्छ। त्यसैले चिकित्सको परामर्शमा रहनुपर्छ।
– चिसोमा मादक पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रित गर्नुपर्दछ।
– पटक–पटक प्रयोग गरिएका तेल र घिउ खानु हुँदैन।
– नियमित व्यायाम र मेडिटेशन गर्दा शरीरलाई फाइदा पुग्छ।
डिप्रेसनको उपचार सम्भव छ: करुणा कुँवर [भिडियो] मनोविद करुणा कुँवरसँग हामीले डिप्रेसन के हो ? किन हुन्छ र कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः ९ घण्टा पहिले